Sunday November 22, 2020 - 15:54:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo culus ayaa markale dib uga qarxay waqooyiga gobolka Tigray kuwaas oo udhaxeeya ciidamada dowladda Xabashida iyo maleeshiyaadka ismaamulka Tigreega.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo lagu hoobtay ay dhinacyadan cadowga wada ah ku dhaxmarayaan dhul qiyaastii 177 KM dhanka waqooyi uga beegan magaalada Maqalla ee caasimadda ismaamul goboleedka Tigray.
Dhinacyada hardamaya ayaa guulo ka kala sheeganaya loollanka socda inkastoo aan lasoo sheegin horumarro waaweyn oo sabab unoqon kara in dirirta lasoo afjaro.
dowladda Itoobiya ayaa shalay gelinkii dambe ku dhawaaqday in horumar militari ay ka sameysay dagaalka Tigray iyadoo iska indhatireysa cadaadiska caalamiga ee ah ee lagu dalbanayo in lagu dejiyo colaadda taas oo ku riixday tobanaan kun oo qof in ay qaxaan, hay'adaha reergalbeedka ayaa wadnaha farta ku haya in macluul ay ka dhalato isdilka xabashida.
Warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay kusii siqayaan magaalada Maqalla ee caasimadda u ah ismaamulka Tigray.
Sida laga soo xigtay wakaaladda dowladda Itoobiya ciidanka Xabashida waxay la wareegeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Tigray waxaana kamid ah magaalooyinkaas Aksom iyo Adigrat oo ku yaal meel qiyaastii 117 km waqooyiga ka xigta Maqalla.
dhinaca kale Jabhadda Xoreynta Dadweynaha Tigreega ayaa bayaan ay soo saartay kaga hadashay duqeyn culus oo lagu bartilmaameedsaday Adigrat iyada oo aan cayimin cidda hadda gacanta ku haysa magaalada.
Ilo wareedyo maxalli ah ayaa sheegay in duqeymo aad uculus lagu garaacay dhufaysyo ay maleeshiyaadka Tigreeda uga jireen dhulka buuralayda ah ee Adigrat arrinkaas oo sababay in laga saaro difaacyadii ay ku sugnaayeen.
saraakiisha Tigreega waxay guuldarrada soo gaartay ku macnaynayaan diyaarado Drone ah oo ay leedahay imaaraatka carabta kuwaas oo kasoo kacaya saldhigga magaalada casab ee dalka Ereteriya iyagoo kaalmeynaya melleteriga Itoobiya.
Bayaan uu soo saaray Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya wuxuu ku amaanay horumarka ciidanka ciidankiisu ka sameynayaan jiidda hore ee macrakada "Ciidamadeenu waxay gabi ahaanba ka xoreeyeen magaalada Adigrat maleeshiyada Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega" ayuu yiri Abiy Axmed.
xukuumadda addis ayaa iska dhega tiraysa dhammaan baaqyada caalamiga ah ee dalbanaya in xaaladda laqaboojiyo islamarkaana wadahadal lala galo jabhadda Tigreega.
Ururka Midowga Afrika ayaa u magacaabay saddex madaxweyne oo hore in ay noqdaan ergooyin gaar ah oo u tagaya Ethiopia si ay u raadiyaan dhex dhexaadin sida uu sheegay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, oo haatan haya xilka meertada ee midowga.
sidoo kale dadka isaga barakacay itoobiya ee gaaray dalka suudaan ayaa kor udhaafay 60,000 oo ruux waxaana lasaadaalinayaa in qaxootigu ay ka bataan 200-kun oo ruux.
Waxaa lasaadaalinayaa in dagaalka gobolka Tigray uusii daba dheeraado sababa laxiriira maleeshiyaadka TPLF oo udiyaar garoobay dagaalka jabhadayska loo yaqaan si ay usoo ceshtaan dhulkii laga qabsaday ayna jilbaha dhulka ugu dhuftaan taliska Abiy Axmed